Inona no marina ny fanafihana amin'ny fahafatesana vokatry ny pedophile any Assen? : Martin Vrijland
Inona no marina ny fanafihana amin'ny fahafatesana vokatry ny pedophile any Assen?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 August 2019	• 5 Comments
Tantara tena niavaka tao amin'ny haino aman-jery lasa teo izany. Ary indrindra toa ahy ity tafatafa ity miaraka amin'ny ben'ny tanàna Marco Out ao amin'ny tranokalan'ny NOS mitodika any aoriana, dia tonga indray amin'ny fahatsapana fahatokisana ny fihetsika. Pedophile izay nodarohan'ny lehilahy 5; izay nikapoka azy ho faty. Zazavavy iray efa-taona dia heverina ho maloto ao amin'ny kianja filalaovana, ka izany no ampolavinao ny namanao rehetra mba hamono azy. Tsy mampino ve izany? Tsia, tsy dia toy izany.
Azoko an-tsaina ny hoe raha misy zavatra toy ity nitranga ity dia hikapoka azy avy hatrany ianao. Tsy mila miantso namana efatra ianao. Raha tsy hoe mpandeha maimaimpoana maimaim-poana i MMA, saingy toa tsy dia mifanaraka amin'ny andrasana izany.
"Inona no nitranga izao, ahoana no hiatrehako azy, inona no hitako marina?”Ny ben'ny tanàna Marco Out dia nitroatra kely be ihany tamin'ny resadresaka NOS. Ny mpandraharaha izay mitantara ny tantarany ao amin'ny horonantsary voalohany (jereo NOS article) malefaka koa amin'ny lahateniny ary mandritra izany fotoana izany no ahitantsika ny fomba atsangan'ny tranolay iray any aoriana, ka raha ny marina dia tsy hisy na inona na inona hitan'ny mponina eo an-toerana. Raha fintinina: misy vintana tsaratsara kokoa fa hijerena indray ny famoahana vaovao tsy marina momba ny haino aman-jery mahazatra. Tantaran'ny gidro iray momba ny vanim-potoana 'Olana, fihetsika, vahaolana. Ahoana ny fanaovana izany maxim izany? Eny, mamorona olana (noforonina) ianao. Manasa ny fihetseham-po (amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sy ny media sosialy) eo amin'ny vahoaka ary hiantoka fa tezitra tanteraka ny rehetra avy eo hanolotra ny vahaolana. Izany foana dia lalàna vaovao henjana kokoa.
Ianao dia efa nanombatombana ny lalàna vaovao stricter ho avy aorian'ny tantara avy amin'i Assen: fiarovana bebe kokoa ho an'ny pedofilia, mba tsy handrara anay miaraka. Na ahoana na ahoana, ny pedophile dia hahazo ny toeran'ny niharam-boina amin'ity fomba ity sy izay rehetra omena ny toeran'ireo niharam-boina, te hanafina mangingina toera-pandrika ianao. Andraso kely. Maminavina mialoha aho fa ho avy tsy ho ela.
Miala tsiny, fa tsy mety amiko kosa ny mivezivezan'ny namanao handroba ny mpandeha. Azonao atao ihany izany rehefa reflexo spontan voalohany. Ny namana dia tsy hanampy anao handresy olona ho faty, satria ny namana dia hanondro anao ny isan'ny taona tsy maintsy lalovanao. Ankoatr'izay, ireo namana ireo izao dia tsy maintsy mihemotra manaraka ny bara sy ny marina, tsy mino aho fa ny toe-tsain'ny fanahy toy izany dia efa miorim-paka ao anatin'ny toe-tsaina an'ny olona holandey isan-karazany. Samy mieritreritra ny tranony, ny hazo, ny bibiany ny olona rehetra, ka tsy hanampy ny namana hamely olona ho faty ianao. Izahay indray mandeha mitory indray famokarana vaovao sandoka, miaraka amin'ireo mpisehatra hitanao amin'ny sarimihetsika ho toy ny mpandray anjara fototra. Manala baraka anao!
Iza no mahatsiaro ny famonoana an'i Jeroen Denis rain'i Ruben sy i Julian zanany? Fanamarinana ny hosoka vaovao
Tags: 4, Assen, ben'ny tanàna, fahafatesana, Featured, nokapohina, Marco, ankizivavy, vaovao diso, Out, pedophile, maty, vier, efa-taona
26 Aogositra 2019 ao amin'ny 09: 10
Ataovy / mamorona sy mampihetsi-po ny anjara asan'ny lasibatra, asio feo ary tsy mahita antony ny vahoaka
hino fa tsy handeha ho tahaka izany.
Mahamenatra fa nalain'izy ireo ny horonantsary Joris Truthseeker momba ilay fanapahana mivaingana amin'ny harato, ny
tsy afaka ao an-tsainao ny fahamarinana.
26 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 02
gijs nanoratra hoe:
26 Aogositra 2019 ao amin'ny 21: 43
inona ny tsy fitoviana nitranga teto na ny zava-niseho tamin'ny fantsom-pokontany nanafika an'ilay olona nanararaotra ny zanany vavy tamin'ny basy ary niditra tao am-ponja nandritra ny fotoana ela.
Efa nampitandrina ny polisy izy nefa tsy tonga, ka niditra an-tsehatra izy.
Saingy eny, manana fahasamihafana amin'ny fahamarinana ianao.
26 Aogositra 2019 ao amin'ny 22: 29
Eny, manana ny ‘fitsarana ambony noho ny lalàna’, ny rariny ho an'ny vahoaka mpanabe sy ny fahamarinana amin'ny savony ahafahana manamafy ny lalàna ho an'ny vahoaka
27 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 04
Mitoera amin'ny lavenona, tsy mbola nahare olona avy amin'ny lavenona. Manana appie ary avy eo hitako.
Tantara iray dia hoe pedo voalohany io, ok avy eo mieritreritra aho fa marina izany. Izao indray dia lazaina indray fa ilay marenina sy marenina no martin .. raha misy olona maty dia tsy fantatro tsara, fa miaraka amin'ny lehilahy 5 amin'ny 1 dia avy eo dia nolazaina fa hafahana amin'ny alahady satria tsy misy porofo momba izany fanararaotana (voadaroka ho faty ary tsy misy porofo? hmm) ...
Ny lojika sy ny fahazavana dia tsy zavatra an'ny polisy sy ny fampahalalam-baovao fa efa fantatsika fa efa ..
Toy ny zavatra hafa dia zavatra adinon'ny tsirairay ao anatin'ny iray volana na 2 ary avy eo ny lalàny sy ny lalàna vaovao dia efa nanipy azy .. fanao mahazatra nefa tsy misy miraharaha!
Kheb ity avy amin'ny rtvdrenthe sy vaovao momba ny famaky. nl
Misaotra indray noho ny fanoloran-tenanao martin indray
« Mandoro an'i Amazona, may ny havokavon'ny tany!
Yolanthe Cabau sy ny andiam-paritry ny polisy, ny famokarana John de Mol tsara tarehy (sahala amin'ny vaovao ANP) »
Total visits: 15.971.065